'राष्ट्रियता केपी ओलीलाई जिम्मा लगायौँ' ‘शेरबहादुरजीलाई पुग्यो, रामचन्द्र अलमस्ट प्रेसिडेन्ट’
आजको न्युज सोमबार, २५ चैत्र २०७५
कांग्रेसमा विचारको विचलन
२०४६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बहाव यस्तो थियो, कम्युनिष्टसँग नमिलीकन आन्दोलन गरेको भए पनि पञ्चायत ढाल्न सकिन्थ्यो । वीपी कोइरालाको लाइनबाट विचलनको प्रस्थान विन्दु ०४६ सालको आन्दोलन हो । मलाई पीडा कहाँ हुन्छ भने गणेशमान सिंह, किसुनजी र गिरिजाबाबुजति विपीको संगत मैले गरेको हो र ? ०२५ सालमा जेलबाट छुटेपछि चिनेको । गिरिजाबाबुलाई ०२३ सालमा नख्खु जेलमा भेटेको । किसुनजीसँग नेविसंघ अधिवेशनको उद्घाटनमा बोलाउन जाँदा भेटेको । नेपालको यो दुर्दशा हुनुमा वीपीका सहयात्रीहरूले पनि विपीलाई चिनेनन् ।
राजाहरू त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्र तीन पुस्ताले पनि चिन्न सकेनन् । बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा विपीको अडानबाट त राजालाई पनि फाइदा थियो नि ! राजाले त्यो बुझेनन् । उहाँबाट तालिमप्राप्त सहयात्री नेताहरूले पनि चिन्न सकेनन् । कम्युनिष्टको राजनीति धोकाधडीको रह्यो ।
सन् १९१७ मा रसियामा क्रान्ति हुँदाखेरी मेन्सेभिक भन्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको बहुमत थियो । लेनिनको बोल्सेभिक भन्ने पार्टी अल्पमतमा थियो । त्यो क्रान्तिकारी झुण्डले सारा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई नरसंहार गरेर संविधानसभामा जबर्जस्ती कम्युनिष्ट शासन लाद्यो । जेठो कम्युनिष्ट शासन त त्यो हो नि ! त्यसकै प्रभावले पूर्वी युरोप गयो । सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिज्म आयो ।
यो मुलुकमा अहिले विदेशीको हस्तक्षेप छ । कम्युनिष्टहरूको यत्रो सत्ता आरोहण कहीँ न कहीँ हाम्रै कमजोरीले भएको हो । वीपीकै सहोदर भाइ गिरिजाले वीपीलाई बुझ्नुभएन । शेरबहादुर, रामचन्द्रजी मैले के बुझ्छु भन्नु ? ०४६ सालमा कम्युनिष्टसँग हल बाँधेर आन्दोलन गर्ने गणेशमान र किसुनजी होइन ? ०६३ सालमा माओवादीलाई ङ्याकेर ल्याइयो । १२ बुँदेमा ल्याएर शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन गिरिजाबाबुको योगदान रह्यो । उहाँ कहाँ चुक्नुभयो ? संसद पुनर्स्थापनको माग गिरिजाबाबुको मात्र थियो, कांग्रेसको पनि होइन ।
सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएपछि संविधानसभाको चुनाव यही सरकारले गराउँछ भनेर अडान लिनसक्नुपथ्र्यो । जितेका मान्छे भंग गरेर खल्तीका मान्छे अंशवण्डा गर्नुभयो । संसदमा कम्युनिष्ट बलियो बन्यो । त्यही शृंखला ०७४ सम्म आउँदा बाबुराम भट्टराईलाई मत हाल्न भन्यौँ । प्रचण्डको छोरी रेणु दाहाललाई मत हाल्न भन्यौँ । कांग्रेस उम्मेदवारको मनोनयन जबर्जस्त खारेज गरियो । पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापालाई मत हाल्यौँ । ०४६ सालदेखिको विकृति थुप्रिँदा थुप्रिँदा यो दुर्घटना त हुनु नै थियो । तर एकैचोटि कांग्रेस यो हालतमा पुगेको चाहिँ होइन । अन्तिम दुर्गतिका बेलामा मेरो मित्र शेरबहादुरजी पर्नुभयो ।
चुनावमा हारजीत हुन्छ । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । सत्ता र भत्तामा माओवादीलाई पल्काइदिएपछि जंगल जाँदैनन् भनेर त्यसो पनि गरियो । अब प्रचण्ड जंगल जान्छन् ? मरे जाँदैनन् । ०१५ साल, ०४७ साल वा ०७२ सालमा संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको छ । कांग्रेससँग यति धेरै राजनीतिक पुँजी छ । यसलाई कांग्रेसले जोगाउन र बेच्नै जानेन । वीपी कोइराला चिन्नका लागि अदालतको फैसला पढ्नुहोस् । चुनाव पराजयमा नैतिक जिम्मेवारी मेरो भन्ने हुती शेरबहादुरजीको भएन । सभापति बढी जिम्मेवार हो तर वरिष्ठ नेता, महामन्त्री पनि अछिुतो हुनुहुन्न । हामीसँग नैतिक तागत नै छैन । राष्ट्रियता केपी ओलीलाई जिम्मा लगायौँ । ९० प्रतिशत ओमकार परिवार कमल थापालाई जिम्मा दियौँ, मधेस मधेसवादी दललाई छाड्यौँ ।
भोट बैंक कहाँ छ हाम्रो ? हामी कहाँ उभिने ? धरातल के हो कांग्रेस उभिने ? त्यसैले हामी दुई तिहाई महासमिति सदस्यहरूले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्‍यौँ तर त्यसलाई लत्यायौँ । समानुपातिकमा एक पटक अवसर दिने हो । कांग्रेसमा चुनाव नलड्ने तर योगदान गरेका हजारौँ मानिसहरू छन् । उनीहरूको पालो कहिले आउँछ ? चिन्ताको कुरा छ । शेरबहादुर छ पटक लड्नुपर्ने, रामचन्द्र छचोटि लड्नुपर्ने, विमलेन्द्र पाँचचोटि लड्नुपर्ने, प्रकाशमान पाँचचोटि लड्नुपर्ने ! यसरी युवाहरूको पालो कहिले आउँछ ? मेरो मान्यता के हो भने आफ्नो समयमा जे गर्न सकियो, त्यो नै योगदान हो । सबै प्रधानमन्त्री हुन त सकिँदैन ।
शेरबहादुरजीलाई पुग्यो, रामचन्द्र ‘अलमस्ट प्रेसिडेन्ट’
मैले शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीलाई उहाँहरूकै अगाडि धेरै कुरा भनेको पनि छु । चारचोटिमै ध्वस्त गरिसक्नुभयो, छचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीको फन्दामा नपर्नुहोस् भनेर शेरबहादुरजीलाई भनेको छु । मैले अमेरिकामा छँदा ‘अलमस्ट प्रेसिडेन्ट’ भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ । राष्ट्रपतिमा चुनाव लडेको, हारेको तर राष्ट्रपतिको भन्दा कम योगदान नभएका ‘अलमस्ट प्रेसिडेन्ट’ भन्ने पुस्तक छ । रामचन्द्रजी ‘अलमस्ट प्रेसिडेन्ट’ हो, ‘अलमस्ट प्राइमिनिस्टर’ हो । किसुनजी र गिरिजाबबुको पालामा कार्यवाहक सभापति हुनुभयो । सुशील कोइराला बित्नुभयो, कार्यवाहक भएर १३औँ महाधिवेशन गराउनुभयो ।
तपाईंको त्यसैमा कट्टी भयो, मरिहत्ते नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु । ध्रुव वाग्ले, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेलको पालो तनहुँमा कहिले आउने ? कर्ण मल्लको पालो डडेल्धुरामा कहिले आउने ? प्रकाशमान र विमलेन्द्रले आफ्नो क्षेत्र ओगटिरहने हो भने त्यहाँका युवा कहाँ जाने ? सफल नेता त्यो हो, जसले आफूपछिको सफल नेतृत्व जन्माओस् ।
महाधिवेशनमा चुनीचुनी हिसाब गर्न सक्नुपर्‍यो
महासमिति भनेको महाधिवेशनपछिको ठूलो अंग हो । केन्द्रीय समितिभन्दा पनि ठूलो हो । देउवा र पौडेलले हात उठाएर तपाईंहरूको रायअनुसार विधान ल्याउँछौँ भनेर टुंगो लगाएको हो तर बहुमतको बलमा आयो । कांग्रेसको सभापति, महामन्त्री हुन खोज्ने अनि बुथबाट आउन डराउने त ? जनतासँग सम्पर्क त टुट्यो । हामीले राखेको एजेण्डामा जाँदा त पार्टी बलियो हुन्छ नि ! शेरबहादुर, रामचन्द्र, शशांकलगायतका सबै नेता गाउँ जानुपर्‍यो । गाउँमा नेता आए है भनेर हलचल पनि हुन्छ । जो बुथमै आउँदैन त कसरी नेता हुन पाइन्छ ? हामीले गरेको गल्ती हामीले नै सच्याउने हो ।
महासमितिको दुई तिहाईको एजेण्डालाई पचाउन सक्नुभएन भने एक वर्ष बढाएर त खानुहोला, पछि महाधिवेशनमा त जानुपर्छ । महासमितिको भावनालाई ध्यान नदिएर विधान संशोधन भएन भने कसकसले हो स्वतः आउन पाइन्छ भनेर भोट हालेका, तिनीहरूलाई महाधिवेशनमा चुनीचुनी हराउन सक्नुपर्‍यो । शेरबहादुर हट्नुपर्‍यो, फलानो हट्नुपर्‍यो भनेर त भएन नि ! एउटा प्रक्रियासम्म त पर्खनुपर्‍यो । यही सुधार्ने हो । यही कांग्रेसलाई कसरी सुदृढ बनाउने मेरा प्रिय मित्र पार्टी हाँकिरहनुभएका साथीहरूले सोच्नुपर्‍यो । मैले त सल्लाह दिने न हो ।
प्रगतिशील कुरा भन्ने हो भने भोट माया मार्नुहोस् । कसरी धर्मनिरपेक्षता आएको रहेछ देखिहाल्नुभयो ? ओलीहरूले होली वाइन पिए, त्यो पनि नक्कली कोरियन क्रिश्चियनबाट । उदांगो हुँदै गयो नि कसरी धर्मनिरपेक्षता आएको रहेछ भनेर ।
६ ‘भ’सँग सचेत रहन गिरिजाबाबुलाई सुझाव
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरो सल्लाह लिनुहुन्थ्यो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको पाचौँ दिनमा म बालुवाटार गएँ । म सांसद पनि थिइनँ । तपाईं छ ‘भ’सँग सचेत रहनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई सुझाव दिएँ । उहाँले केके भन्नुभयो ? मैले भनेँ भाउजूको ‘भ’, भान्जीको ‘भ’, भाइको ‘भ’, भतिजाको ‘भ’, भारतको ‘भ’, भरतशमशेरको ‘भ’ । प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै टनकपुर आएको त होइन । त्यही विषयमा गिरिजाबाबु एकातिर, किसुनजी र गणेशमान अर्कोतिर भएर लडाइँ भयो । मैले ०४८ जेठ २० गतेतिर भनेको हो । २०४९÷०५० तिर त हो टनकपुर आएको । भारतले टनकपुरमा फसायो । भान्जीको भ अर्थात् शैलजा आचार्य मन्त्री भएको १३ महिनामै यो भ्रष्टाचारी सरकार भनेर राजीनामा दिइन् । सरकारको नेतृत्व त गिरिजाले गरिरहेका थिए । भरतशमशेरले छत्तीसे फुटाए । त्यही छत्तीसेले समय नै नपुगी ०५१ मा सरकार गिरायो । त्यस्तै थुप्रै भतिजाहरू थिए । हेर्नुपर्‍यो गिरिजाबाबुले ।
भाइ सुशील कोइराला । नोनाआमा भाउजूु । उहाँका नातागोताका राजनीतिक नियुक्ति सबै उनीहरूलाई नै । गिरिजबाबुलाई मैले सुझाव दिँदा न टनकपुर, छत्तीसे जन्मिएका थिए, न त भान्जीले भ्रष्टाचारी सरकार भनेको अवस्था थियो । गिरिजाबाबुले मेरो सल्लाह मानेको भए यो दुर्दशा नआउने । शेरबहादुरजीले पनि मेरो सल्लाह मानेको भए यस्तो अवस्था नआउने । बिनाशुल्क मैले सुझाव दिएँ । त्यसको मूल्य भएन । जे नहनु थियो, त्यो भइसक्यो ।
‘हिरो बाई चान्स’ हो सुशील कोइराला
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुनुपथ्र्याे । एमाले प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस जानुपथ्र्यो । त्यहाँ गलत भयो । राजनीति गर्नेले पद छाड्न र मर्न समय मिलायो भने अमर हुन्छ । त्यो जानेन भने ध्वस्त हुन्छ– सुशील दाइ जस्तो । प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, राष्ट्रपति पनि बन्दिनँ भनेर भन्नुहोस् भनेर कृष्ण सिटौला र मैले धुमधाम गरेको हो । मान्नुभएन । मानेको भए विपीभन्दा मुनि राख्न लायक नेता उहाँ बन्नुहुन्थ्यो । ‘हिरो बाई चान्स’ हो सुशील कोइराला । तर दक्षिणको डिजाइन थियो उहाँलाई नबनाउने ।
विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थ्यो भारत । ब्लड क्यान्सर भएकी विद्या भण्डारीलाई कसले बचाएको छ ? एपोलो अस्पताल । हाम्रो विचरा खुमबहादुर खड्का ३० महिनामा गए किड्नी ड्यामेज भएर । केपी ओली १२ वर्ष बाँचिरा’छन् । भारतको एयर एम्बुलेन्स आएर लगेको हो नि ! पार्टी सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला घरमै बिते । अस्पतालसम्म पुग्न पाएनन् । ओलीलाई एयर एम्बुलेन्स आएर दिल्ली लगियो, प्रधानमन्त्री नहुँदै । भारतको मान्छे भनेर बात लाग्यो सुशील कोइरालालाई । खासमा को रहेछ त भारतको मान्छे ? सबै देशसँग मित्रता गर्नुपर्छ । अबको कांग्रेसको नेतृत्व आयातीत नहोस् ।
ओलीहरूले होली वाइन पिए
मैले पहिला जेजे हुँदैन भन्छु, मानिसहरूलाई त्यही कुरा भन्न धेरै वर्ष लाग्यो । मुलुकको हितका लागि अलोकप्रिय नै हुनुपरे पनि म आफ्नो राय राख्छु । अहिलेको दुनियाँका लागि प्रतिगामी नै सही । जस्तो : हिन्दु राष्ट्रको कुरा । सबभन्दा ठूलो आस्था धार्मिक आस्थामा चोट पुगेपछि संसारमा कति लडाइँ भएका छन् । धर्मनिरपेक्षता भन्दा के बिग्रियो र ? प्रगतिशील कुरा भन्ने हो भने भोट माया मार्नुहोस् । कसरी धर्मनिरपेक्षता आएको रहेछ देखिहाल्नुभयो ? ओलीहरूले होली वाइन पिए, त्यो पनि नक्कली कोरियन क्रिश्चियनबाट । उदांगो हुँदै गयो नि कसरी धर्मनिरपेक्षता आएको रहेछ भनेर । कसका पैसा खाएर हामी बिकेका रहेछौँ संविधान ल्याउँदा ।
(आजको न्युजकर्मी जगन्नाथ दुलालले कांग्रेस नेता कोइरालासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, २५ चैत्र २०७५